Maxaad Ka Ogtahay Ama Ka Taqaanaa Ahmiyadda ay leeyihiin qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa Xadiiska..?? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Maxaad Ka Ogtahay Ama Ka Taqaanaa Ahmiyadda ay leeyihiin qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa Xadiiska..??
Published: August 29, 2016, 10:00 am
(0) Comments Qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa xadiisku waxay ka midaysan yihiin meesha ay ka yimaadeen iyo ujeeddada laga leeyahay; waayo labaduba waa waxyi xagga Alle ka yimid, ujeeddada loo soo dajiyeyna waa in addoomadu ku waano-qaataan, kana faa’iidaystaan. Waxyaabaha ina tusinaya ahmiyaddooda gaarka ahna waxaa ka mida:
1. Inay ugu wanaagsan yihiin qisooyinka. Ilaahay wuxuu yiri: (Waxaan kaaga qisaynaynaa qisooyinka kuwiii ugu wanaagsanaa). Qisooyinka Nabiguna ( صلى الله عليه وسلم ) waa darajada ku xigta kuwa Qur’aanka; maxaa yeelay iyaguna waa waxyi xagga Rabbi ka yimid.
2. Qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa Xadiisku waa wada run, waana wada dhab, waxayna ka sheekaynayaan waxyaabo dhacay oo aan siyaado iyo nusqaan midna ku jirin. Ilaahay wuxuu yiri: (Annaga ayaa kaagaga qisaynayna warkooda (asxaab alkahf) si dhab ah). Wuxuu kale oo yiri Alle: (kani isaga uun baa ah qisooyin dhab ah). Qisaduna dhab ma noqon karto say u dhacday in loo wariyo mooyee. Ilaahayna been waa ka hufan yahay, mana dhici karto inuu sheego qiso aan dhicin ama u sheego si aysan u dhicin. Halka qisooyinka kale ay isugu jiraan wax dhab ah oo dhacay iyo wax la mala-awaalay.
3. Tan kale Ilaahay qisada uu ka warramayo waa wax cilmi ku dhisan oo aan mala-awaal ahayn, illeyn waa Alle cilmi badane. Wuxuu yiri Rabbigeen: (waan u qisaynaynaa annaga oo xog ogaal ah, mana aannaan ahayn cid maqan).
4. Ilaahay wuxuu Nabiga ( صلى الله عليه وسلم ) ku amray inuu dadka uga sheekeeyo qisooyinka uu og yahay; si ay ugu fakaraan xaaladaha ummadihii hore, ugu daydaan hadday wanaagsan yihiin, ugana dheeraadaan falalkooda hadday xumaayeen. Alle wuxuu yiri: (Qisooyinka uga qisee ; si ay u fakaraan). Wuxuu kale oo yiri: (Qisooyinkooda (Ilma Nabi Yacquub) waxaa ugu sugan dadka caqliga leh cibra qaadasho, mana ahayn sheeko la been abuuray).
5. Addoomadu markay ogaadaan qisooyinka Alle uga waramayo ee runta ah waxay naftooda ku yeelanaysaa saamayn weyn, waxaana ku toosaya dhaqankooda iyo akhlaaqdooda, waxayna ka qaadanayaan waansamid iyo cibra-qaadasho.
6. Qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa Nabigu ( صلى الله عليه وسلم ) waa sahay quluubta xaqa ku sugaysa. Ilaahay wuxuu yiri: (Waxaan kaaga qisaynaynaa wax kasta oo aan laabtaada ku sugayno oo akhbaartii rususha ah).
« Warbixinta Ka HoreysayQiso Gaaban:- Muhiimada Aay HOOYADU Ubadka U leedahay waa Aayihiisa Danbe Inuu Hormaro..	Warbixinta Xigto »Carruurtaada iyaga oo yaryar sidee uga dhigi kartaa Kuwa Caaqil Ah Oo Diinta Islaamka Ku Barbaaro.??	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply